Vaovao - Ataovy lalina ny fanavaozana mahia ary ampio i Yongjie hanatsara ny famokarana manan-tsaina
Hamafiso ny fanavaozana mahia ary ampio i Yongjie hanatsara ny famokarana manan-tsaina
Andro vitsy lasa izay, nanao fivoriana tamim-pahamendrehana i Yongjie tamin'ny fivoriana fanombohana ny tetik'asa fanovana, ary ny filohan'ny orinasa Shen Jianguo dia nanery ny bokotra fanombohana. “Eo ambany fitarihan'ny valanaretina anatiny sy ivelany ankehitriny, miatrika fanamby ny toekarena manerantany. Tsy maintsy “mijery anaty” isika ary ho tenantsika, ary hametraka bebe kokoa ny tombony azo avy amin'ny maro, haingana, tsara ary ekonomika 'izay afaka manome lanja fanampiny ho an'ny mpanjifa. ” Nasongadin'Andriamatoa Shen fa misy dikany kokoa ny manomboka tetik'asa fanovana mahia amin'izao fotoana izao.
Nandritra ny fivoriana dia namoaka taratasy fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa mpanolotsaina Andriamatoa Shen, ary namoaka andraikitra ho an'ireo mpitarika ekipa tetikasa 3 an'ny ekipa 5S sy ekipa manatsara ny fitantanana ekipa mahia, ekipa fanatsarana PMC mahia, ary ekipa fanatsarana TPM. Ny mpandray anjara rehetra koa dia nanao fianianana sy rohy hafa. , Ary namoaka ny drafitry ny asa.
Ary farany, Andriamatoa Shen dia nametraka fepetra telo ho an'ny mpiasa rehetra: Voalohany, ny firaisan-kina ideolojika avo lenta, rehefa tsy vita i Lean, raha vao tanterahina, no hany fomba ahafahan'ny orinasa manatsara sy mivoatra; Faharoa, mihetsika avy hatrany ary fanatanterahana tanteraka; fahatelo, miara-miasa hahatratra ny tanjona napetraka ary afaka mihoatra ny tanjona. Nafana ny rivo-piainan'ny fihaonana ary samy natoky ny vokatra andrasana ny rehetra.
Amin'ny ho avy, Yong jie dia hikiry hitandrina ny fanavaozana ny siansa sy ny haitao, niara-niasa tamin'ny University of Science sy ny Teknolojia any Beijing, ny oniversite afovoany atsimo sy ny oniversite malaza any an-toerana, ny andrim-pianarana fikarohana, ny andrim-panjakan'ny orinasa any amin'ny faritany ary ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny faritany Center. Mikaroka sy mamolavola karazana aluminium vaovao isan-karazany izahay, mahafeno ny fepetra teknika avy amin'ny mpanjifa samihafa.
Yongjie dia hanaraka ny politikam-pandraharahana ”mitantana orinasa kilasy voalohany manerantany, mamorona vokatra marika iraisam-pirenena”, Misisika amin'ny fomba fampandrosoana avo lenta, ary andramo ny fomba tsara indrindra hamoronana an'i Yong jie ho toy ny orinasa volamena amin'ny sehatry ny fanodinana aluminium.